६ बर्षकी हुँदा अंकलको छोरासँग ‘सेक्स’ गरेको थिएँ, बुझ्ने भएपछि १८ बर्षमा गरें – तिर्सना बुढाथोकी - JanaSanchar.com
६ बर्षकी हुँदा अंकलको छोरासँग ‘सेक्स’ गरेको थिएँ, बुझ्ने भएपछि १८ बर्षमा गरें – तिर्सना बुढाथोकी
(२०७४ पुष २१, शुक्रबार)
फेसबुक मार्फत नग्न तस्वीरहरु सार्वजनिक गरेर चर्चामा आइरहेकी तिर्सनाले पछिल्लो समयमा नेपाली नारीको मर्यादाको सीमा नै नाघेकी छिन । एउटा अनलाईनलाई दिएको अन्तर्वार्ता पढ्दा उल्टै पढ्नेलाई लाज लाग्छ । अझ अनौठो कुरो त उक्त अन्तर्वार्तालाई तिर्सना आफैले आफ्नो पेजहरु मार्फत शेयर गरेकी छिन । प्रस्तुत छ सोहि सनसनीपूर्ण कुराकानी तर यो अन्तर्वार्ता केवल वयस्क पाठकका लागि मात्र :
यो क्षेत्रमा लाग्नु भाछ,कतिको गार्हो सारो छ यो क्षेत्र ?
भयन्कर स्ट्रगल गर्नु पर्छ , सोचेको जस्तो केही भाछैन ।
अहिले केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ?
मेरो बिजनेस छ क्याफे तेस्लाई ठुलो बनाउन डेकुरेट गर्दै छु।
साथी भाईबाट धेरै पीडित हुनुहुन्छ कि क्या हो ?
एस म केटा भन्दा केटीसँग डरौछु। पैसा मागेर हैरान गर्छन्. केटाहरु घुम्न जाउ भनेर हैरान गर्छन् ।
कती जना केटाहरुले तपाईंलाई घुमाइ सक्यो र कतिलाई घुमाइ सक्नु भो ?
मैले केटालाई घुमाउ छु मलाई त नताकेनि हुन्छ।
कतिजनालाई घुमाइ सक्नु भो लाईफमा ?
गन्ने फुर्सदै छैन ।
घुमाउने मात्र कि अरु पनि ?
मलाई मन परे सर्बस्व दिन्छु मन नपरे टच गरे पनि झगडा गर्छु तेस्लाई अनि लाईफबाटै हटाइदिन्छु ।
धेरैलाई दिसक्नु भोहोला आफ्नो सम्पूर्ण ?
क्वान्टिटी होइन क्वालिटिमा जाउ र आइ एम पर्फेक्ट् फोर सेक्सी ब्वाइ।
भने पछी तपाईं भर्जिन होइन ?
डिफिनेट्ली भर्जिन अहिले कसैलाई मन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जमाना रेड लेवेल भन्दा माथि छ , इन्टेर्नेसनल लेभल मैन्टैन गरेकै राम्रो, जस्ले भर्जिन छु भन्छ तेस्ले सत प्रतिसत झुट बोलेको हो ।
सेक्स कसरी गर्न मन पर्छ ?
म सेक्सी छु मलाई नेपाली होइन बिदेसी स्टाईल मन पर्छ सन्नी लिउन भन्दा कम् छैन म । स्टालिस्टनै मन पर्छ । म खासै सेक्स भन्दा फोर प्ले बडी गर्छु।
सेक्स कतिको खाचो भैरहन्छ् ?
सेक्सले काम अनि लाईफमा थप उर्जा थप्छ । सेक्स नभए बिरामी होइन्छ । जब पुरुष महिला बिच स्किन घर्षण हुन्छ स्किन्लाई रेलाईफ अनि मनलाई सान्त हुन्छ । म सेक्सको बारेमा सोची रहन्न अगाडि आए छोड्दिन ।
तपाईंलाई चाँही दिन कतिको खचो हुन्छ ?
म दिन्कै सेक्स गर्दिन मलाई मन परेको केटा भये मात्र भेट्ने हो नत्र महिनौ पनि आइ डन्ट केयर ।
हस्तमैथुन कतिको गर्नुहुन्छ ?
मलाई आफ्नो शरीरसँग चल्न साह्रै मन पर्छ । मलाई साह्रै मन पर्छ हस्तमैथुन ।
हस्तमैथुन कसरी गर्नुहुन्छ ? बुझ्न सक्छु ?
राती सुत्ने बेलामा मेरो हात बूब्स अनी पुसिमै हुन्छ ।
कती घण्टा गर्नु हुन्छ ?
हा हा हा सर हात्का औलाहरु भनेकै सेक्सको पहिलो इमोसनल पार्ट हो। अझ मत भन्छु मलाई पुरुषको औलाले सेक्स गरिदेको मन पर्छ , ककले होइन।
तपाईंलाई ठुलो कि सानो मन पर्छ ?
ठुलो सानो म हेर्दिन मलाई माया लाग्नु पर्छ मन मिल्नु पर्छ बिना काका पनि सेक्स गर्न सकिन्छ ।
कसरी गर्ने नि बिना त्यो ?
हाहा सेक्सको बिषयमा मेरो भिन्न धारणा छ् सेक्स ककले होइन मायाले हुन्छ भनेनी पुरुषले औंला बाट पनि सेक्स गरिदिन सक्छन ।
हातको बिकल्प सेक्स टोय प्रयोग गर्नु भाकोछ ?
एस गरेकी छु । मलाई सेक्स गर्न मन लगे सेक्स टोए पनि युज गर्छु केटाहरु भन्दा त्यो टोयले बरु केहि नभनी मज्जाले गर्छ ।
कहाँबाट झिकाउनु भो त्यस्तो प्रकार को टोय?
ए मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् केटा केटी सबै पाईन्छ तर टोय मात्र।
सेक्स बेला कन्डम प्रयोग गर्नु हुन्छ कि?
अवस्था हेरेर , हेल्थ भन्दा ठुलो सेक्स होइन।
पहिलो सेक्स कती बर्षमा गर्नु भो ?
बच्चामै अंकलको छोरासँग ६ बर्षको उमेरमा । बुझे पछी चाँही १८ बर्षको उमेरमा ।
१८ को बेला गर्दा कतिको गार्हो सार्हो भो गर्न ?
खासै गाह्रो भएन ६ बर्षमै अनुभव थियो।
कतिबेला तपाईंलाई सन्तुस्टी मिल्छ ?
पार्ट्नर खुशी भए,
गर्दा झर्छ कि झर्दैन तपाईंको ?
टाईम पुगे झर्छ ।
केटाको चुस्न मन पर्छ ?
चुसेन भने कसरी सन्तुष्टि मिल्छ? यस्मै त छ मजा नचुसी त कहाँ हुन्छर ?
सन्नी भन्दा काम छुइन भन्नु भो ? सन्नी झै ब्लु फिल्म खेल्न सक्नुहुन्छ ?
लुकमा सन्नी भन्दा कम छुइन मात्र भनेकी हुँ । ब्लु फिल्म नै खेल्छु भनेको चाँही होइन ।
तपाईंको भित्री कुरा जुन चाँही कसैले बुझेका छैनन र देखेका पनि छैनन तेस को बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ ?
मेरो पुसि टाइट अनी सानो छ, आउट लुक्स ह्वाइट् अली हेर्दा ब्राउन भित्री फुल रेड ब्ल्याक खासै छैन । मेरो अन्डर आर्म्स भन्दा पुसि ह्वाइट् छ । अनी सानी छ। उठेको ओवेल साइजको पुसि छ। मलाई त मेरो पुसि साह्रै मन पर्छ मैले अरुको पनि देखेकी छु
यतिका मान्छेले गरिसकेको र आफुले पनि दैनिक हातले र सेक्स टोएले खेलाइ सकेको त्यो कसरी सानो र टाइट भयो त ?
ए हजुर खेलाउदैमा ठुलो हुने होइन त्यो त बेबी भयो भने मात्र हो । पुसि भनेको रबर हो तन्किन्छ खुम्चिन्छ । ककले पुसिलाइ असर् गर्दैन। नारिमा बेबी जन्माने पावर हुन्छ । सोच्नुस् त्यो कती सम्म तन्किन्छ होला बेबी भएसिनी सिलौदा आफ्नै ठौमा खुम्चन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७४ पुष २१, शुक्रबार) 2300 Viewed